Elon Musk Oo Bill Gates Kala Baxay Booska Labaad Qofka Ugu Qanisan Caalamka |
Elon Musk Oo Bill Gates Kala Baxay Booska Labaad Qofka Ugu Qanisan Caalamka
Ganacsadaha dhanka tiknoolajiyadda ee Elon Musk ayaa kaalinta koowaad ka galay aasaasaha shirkadda Microsoft Bill Gates si uu u noqdo ninka labaad ee dunida ugu taajirsan ka dib markii ay degdeg ah aykor ugu kacday hantidiisa gaarka ah.
Hantida Mr Musk ayaa gaadhay $ 7.2bn (£ 5.4bn) una dhiganta $ 128bn kadib markii saamiyada shirkada gawaadhida ee Tesla ay sare u kaceen.
Kaliya aasaasaha Amazon, Jeff Bezos ayaa ka taajirsan, sida uu sheegayo wargeyska Bloomberg Billionaires Index.
Waxay timid ka dib markii wararka saamiyada Tesla lagu dari doono S & P 500, oo ah mid ka mid ah saamiyada ugu waaweyn Mareykanka.
Taasi waxay kicisay mowjado cusub oo iibsiga saamiyada gawaadhidan korontada ku shaqeeya ah, iyadoo u dirtay qiimaha suuqa ee shirkadda in ka sarreysa $ 500bn iyo kor u qaadista qiimaha Mr Musk ee dhanka ganacsiga.
Tesla horey ba wax ay u ahayd shirkadda ugu qiimaha badan ee gawaadhida adduunka, in kasta oo ay soo saartay qayb ka mid ah gawaadhida tartamayaasha la ah sida Toyota, VW iyo General Motors.
Maalintii Talaadada, khudbad uu ka jeediyay Jarmalka, Mr Musk wuxuu ku sheegay inay “macno samayn karto” in Tesla uu ku sii fido Yurub isagoo baabuur yar la soo galaya qaybta suuqa.
“Mareykanka gudahiisa, gawaadhida waxa ay u muuqdaan kuwo ka mudnaanaya waxyaalaha sida shakhsiga ah loo jeclaysto” ayuu yidhi.
Kadib sanado khasaare ah, Tesla wuxuu arkay shan rubuc oo isku xigta oo faa’iido ah maadaama iibinta gawaadhidooda ay sifiican u shaqeynayaan in kasta oo uu dunida ka jiro xanuunkan safmarka ahi.
Shirkaddan fadhigeedu yahay California waxay noqon doontaa soo-galootiga cusub ee ugu weyn ee S & P 500, oo leh qiime ka badan $ 500bn.
Taas oo ahayd warkiu ugu farxadda badnaa ee helaan saamilaydeedu.
Bill Gates, oo aasaasay shirkadda Microsoft, wuxuu ahaa qofka adduunka ugu qanisan sanado badan ka hor inta uusan Mr Bezos ka saarin kaalinta koowaad sanadkii 2017.
Hantida Mr Gates waxay u dhigantaa $ 127.7bn laakiin way ka sii badnaan laheyd hadaanu lacago badan ugu tabarucin sadaqo tobaneeyo sano.
Qiimaha saafiga ah ee Jeff Bezos ayaa lagu qiyaasay £ 182bn sida ay sheegayso Bloomberg. Isaguba sidoo kale hantidiisa shaqsiyeed sare ayay kacday sanadkan iyada oo baahida loo qabo adeegyada Amazon ay uu sii kordhiyey cudurkan fidiyaa.
Mr Musk, oo si joogto ah u ugu soo muuqda maxkamadaha, ayaa waxaa soo martay toddobaadyadii la soo dhaafay, kuwa aad ugu qaali ahaa.
Toddobaadkii hore dhammaadkiisii wuxuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inuu “u badan yahay” inuu hayo Covid-19 isla markaana uu leeyahay astaamo “qabow yar” oo kale ah.
Waxay timid maalin ka hor intaan afar cirbixiyiyaal ayna ka haadin Xarunta Caalamiga ah ee hawada ee lagu magacaabo Mr Musk’s SpaceX oo uu isagu leeyahay.